Blogs - Shwe Myanmars
Admin အပိုင်းနဲ့ တင်ခွင့်ပြုပါရှင့် Part (1) SPass ကရေးရမှာများပါတယ် အပိုင်းနဲ့ တင်ပေးပါမယ် 1. SPass အဓိပါယ် အလည်အလက် level တခုပါ (mid-level ), professional ကတော့ EP ပါ။ 2. ဘယ်သူတွေ လျှောက်လို့ရလဲ • လစာ ၂၃၀၀ နှင့် အထက် : သတ်မှတ်လစာကတော့ ၂၃၀၀ ပါ သို့သော် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ and/or ကိုယ်ရထားတဲ့ အောင်လက်မှတ်နဲ့ လျှောက်တဲ့ position ပေါ်မူတည်ပြီး 2300 ထက်ပိုမှ approve ဖြစ်တာတွေ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ပိုများလာပါတယ် • အောင်လက်မှတ်: သတ်မှတ်ချက်ကတော့ ဘွဲ့လက်မှတ် သို့မဟုတ် ဒီပလိုမာ လက်မှတ်
စင်္ကာပူမှာ အလုပ်ရှာတဲ့ အကြောင်း
စင်္ကာပူမှာ အလုပ်ရှာတဲ့ အကြောင်းလေးတွေ
Group ထဲ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်ရှာတဲ့ အကြောင်းလေးတွေ မေးလာတာရှိလို့ အရင်ရေးထားတာလေး တင်ပေးတာပါ စင်္ကာပူအလုပ်ရှာနေသူများအတွက်ပါ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အလုပ်တွေများနေတော့ စာပို့ထားသူတစ်ချို့ကို ပြန်မဖြေနိုင်လို့ အခုလိုတင်ပေးတာပါ။ သိထားပီးသား သူတွေရှိကြမှာပါ။ အလုပ်လာရှာနေသော ညီလေး ညီမလေး တွေက စာတွေပို့ပီး မေးကြတယ်။ အမြဲလိုလိုတွေ့နေရတဲ့ မေးခွန်းတွေက ရောက်တာ နှစ်ပါတ်ရှိပီ ဘာမှမထူးသေးဘူး အလုပ်လျှောက်တာတွေများ လွှဲနေလို့လား ဘယ်လိုဖြစ်လို့လည်း၊ ဒါနဲ့တစ်ခါတစ်လေ အားတဲ့အချိန်ကြရင် သူတို
ကျွန်တော်တို့ သိရသလောက် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ... - Service Sector (ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ) - Manufacturing (စက်ရုံတွေ) အစိုးရ ပေါ်လစီအရ သူတို့သတ်မှတ် သောထားသောနိုင်ငံမှသူများသာခန့်လို့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမပါခဲ့ပါ။ U Myo Han Kyaw ပို့စ်အရ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ စက်ရုံ လုပ်သားအဖြစ် အလုပ်သွင်းပေး မယ် လို့ ရေးထားတာ တွေ့ရတယ် ပို့စ်တင်သူ ကိုယ်တိုင် မသိတာလား၊ တခုခု လွဲမှားနေတာလား မသိတာမို့ သေသေချာချာ မေးမြန်း စုံးစမ်းကြဖို့ တိုက်တွန်းရင်း ... အလုပ်ရလိုစိတ်နဲ့ တခုခု မမှာ
About Myanmar Agents
တချို့လိုတဲ့နေရာများ သိသောသူနာလည်သူများ သဘောပေါက်အောင် ထည့်ပြောနိုင်ပါတယ် လက်ရှိ Singapore ကိုမသွားဖူးသေးတဲ့သူတွေအတွက် SP နဲ့သွားဖို့လုပ်နေတဲ့ သူတွေကို တစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ် Agent တွေအားလုံးတိုင်းမှာ အလုပ်ကောင်းရှိကြသလို မရှိတဲ့ Agent တွေလဲ များတယ် အလိမ်အညာလဲပေါတယ် မယုံလိုက်ပါနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ Passport လဲမအပ်ထားပါနဲ့ မလုပ်မရသေးခင် စံရံငွေလဲ မပေးပါနဲ့ အလုပ်ကောင်းတွေမှန်သမျှ လူသစ်ဆိုထုပ်မပြပါဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရင်ကသိပ်အချေနေမကောင်းဆဲ့ လစာနဲမောပန်းတဲ့အလုပ်တွေ လူတွေငြင်ပယ်လိုက်လို့ ကိုယ့်အလှည့်က
Work Permit (WP) နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အကြာင်း
ဒီ group မှာ ကျွန်မထက် ပိုတော် ပိုတတ်တဲ့ လူတွေကို ရှိပါတယ် ကျွန်မရေးတဲ့ထဲမှာ အမှားပါရင် highlight လုပ်ပေးကြပါလို့လဲ တောင်းဆိုပါတယ် သိလို့တတ်လို့ကြွားချင်စိတ်ရှိလို့ရတာ မဟုတ်ပါ ရှင့် ဒီgroup ထဲမှာ ရှိတဲ့ မသိသေးတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမ တွေကို ကူညီချင်ရုံသက်သက်ပါရှင့် Workpermit အတွက် အဓိကအချက်လေးတွေပါ (အခြေခံသိထားသင့်တာပါ) ၁.ဘယ်သူတွေ လျှောက်လို့ရလဲ အဖြေ: နိုင်ငံခြားသား မည်သူမဆိုလျှောက်လို့ရပါတယ် သို့သော် မိမိလုပ်မည့်/ လျှောက်မည့် company/လုပ်ငန်းဟာ မိမိနိုင်ငံသားကို Work Permi
Welcome to Shwe Myanmar Community